Tag: ngwa facebook | Martech Zone
Tag: ngwa facebook
Maka ụdị, mmekọrịta mmadụ na ibe ya (ọ bụghị ọnụ ọgụgụ ndị na-akwado ya ma ọ bụ ndị na-eso ụzọ ya) bụ isi ihe dị na mgbasa ozi. Thedị nke kachasị mma, ụdị nke nwere ike iduga ngbanwe, bụ ntinye aka. Ndị na-ere ahịa nwere ike ime nke ahụ ma ọ bụrụ na ha na omume mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke ndị na-akwado ya ma ọ bụ ndị na-eso ụzọ ya kama ịbụ ihe a manyere ha ma ọ bụ iwu ka ha zaghachi. Gbalịa Offerpop. Nke a web based elekọta mmadụ ahịa management ngwá ọrụ na-akwado ndị